Tababaraha Everton: aad baan uga carooday goosha Terry - BBC News Somali
Tababaraha Everton: aad baan uga carooday goosha Terry
17 Jannaayo 2016
Image caption Roberto Martinez
Macalinka layliya kooxda Everton, Roberto Martinez ayaa sheegay in uu si dhab ah u carooday kaddib markii kooxdiisa laga dhaliyay gool muran keenay oo ka hor istaagay in ay ka guulaystaan kooxda Chelsea oo bareejaysay daqiiqadii 98-deedaad.
John Terry ayaa goosha dhaliyay isaga oo osfayt ku jira ama taagan meel ay khalad tahay in uu istaago wuxuuna ciyaarta ka dhigay saddex iyo saddex barbaro ah.
Ciyaarta ayaa ka dhacday garoonka Chelsea ee Stamford Bridge.
Martinez ayay kooxdiisu markii hore ciyaarta ku hogaaminaysay labo iyo eber, markii dambana waxay ku hogaaminaysay saddex iyo labo kahor inta aan la barbaraynin ilbiriqsiyadii u dambeeyay ee ciyaarta.
Martinez wuxuu sheegay in garsooreyaasha ciyaartu ay sameeyeen labo khalad oo waawayn iyada oo Terry uu goolka barbaraha dhaliyay kaddib markii ay dhamaadeen todobadii daqiiqo ee loo qorsheeyay in ciyaarta lagu daro.
Kooxda Everton ayaan badinin afartii ciyaarood ee u dambeeyay, sagaalkii ciyaarood ee u dambeeyayna hal ciyaar oo kali ah ayay guul ka gaareen.
Tababaraha ku meel gaarka ah ee Chelsea, Guus Hiddink ayaa sheegay in uu garsooraha ka codsaday in uu ku daro wakhti dheeri ah maadaama oo ay Everton daqiiqad u qabaaldagtay gooshoodii saddexaad.
Hiddink ayaase qirtay in goosha Terry ay ofsite ahayd.